Warshad saarayaasha alaabooyinka xayawaanka ah - Alaabooyinka AASraw
/ Products / Warshad Warshad
Maqaalkani, waxaan inta badan soo bandhigaynaa alaabta dhirta dabiiciga ah ee dabiiciga ah, sida Bromelain, orange qadhaadh, iwm.
Bromelain waa enzim laga helo cabitaanka casiirka iyo gudaha stem. Dadku waxay u isticmaalaan daawada.
Bromelain waxaa loo isticmaalaa yaraynta bararka (caabuq), gaar ahaan sanka iyo sanka, ka dib qaliinka ama dhaawac. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qandhada cagaaran, daaweynta xaalad caloosha oo ay ka mid yihiin barar iyo boogo (ulcerative colitis), ka saarida unugyada dhintay iyo waxyeelo ka dib gubasho (qashin), ka hortagga ururinta biyaha ee sambabada (barar sambab), murqaha nasashada, kicinta murqaha muruqyada, hoos u dhigista xinjirta, hagaajinta nuugista antibiyootigga, ka hortagga kansarka, yaraynta foosha, iyo caawinta jidhka ayaa ka takhalusa baruurta.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ka hortagga muruqyada kaadida kadib jimicsi xoog leh. Isticmaalkan ayaa la darsay, iyo caddaynku wuxuu soo jeedinayaa in bromelain uusan u shaqeynin tan.
Dadka qaarkiis waxay isticmaalaan alaabta (Phlogenzym) ee arthritis-ka (osteoarthritis) ee isku dhejiya bromelain leh trypsin (protein) iyo rutin (walax laga helo bakeer). Bromelain ayaa loo adeegsadaa sidan oo kale waxay u muuqataa in ay yareyso xanuunka iyo horumarinta jilibka ee dadka qaba arthritis.
Ma jirto caddayn cilmi ah oo ku filan oo lagu ogaanayo iyo inaysan jirin falooleeye oo waxtar u leh mid ka mid ah isticmaalka kale.
Bromelain waxay u muuqataa inay jidhka u keento walxo la dagaallama xanuunka iyo bararka (inflammation).
Bromelain waxaa kale oo ku jira kiimikooyin fara-galin kara kobaca unugyada burooyinka iyo xinjirta dhiigga.
Cananaaska, oo u dhashay Koonfurta Ameerika isla markaana qayb weyn ka ah dawada dadka Hawaiian, waa mid ka mid ah ilaha ugu qanisan adduunka ee enzyme bromelain. Waxay ka kooban tahay dhowr endopeptidases iyo xeryahooda sida phosphatase, glucosidase, peroxidase, cellulase, escharase iyo protease inhibitors. Badanaa "bromelain" oo lagu iibiyo soosaar ama foomka dheeri ah waxaa loola jeedaa enzymes laga soosaaray afkoda cananaaska ama buundooyinka, halkii laga heli lahaa hilibka midhaha.
Waxaa loo adeegsaday sida daaweynta dabiiciga ah si loo daaweeyo wax kasta oo ka yimaada caloosha ilaa xasaasiyadda, curaanku kuma koobna oo keliya enzyming, laakiin sidoo kale fitamiin C, fitamiin B1, potassium, manganese iyo phytonutrients. Inkasta oo anaanku haysanin faa'iidooyin badan, qarsoodi dhabta ah ee awoodaha bogsashada ayaa dhab ahaantii bromelain ah.
Waa maxay bromelain loo isticmaalo daaweynta? In adduunka caafimaadka, buuggan xiisaha leh ayaa sida caadiga ah loo adeegsaday sida xoog leh anti-bararka iyo anti-bararka. Cilmi baaris ayaa sidoo kale muujisay in ay leedahay fibrinolytic, antiyemontous iyo antithrombotic, taasoo macnaheedu yahay inuu ka caawiyo ka hortagga xinjirta dhiigga, bararka iyo bararka. Waagii hore, enzyme this waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida hindise hilibka, sababtoo ah waxay caawisaa in ay ku dajiyaan oo dejiyaan murugada, muruqyada bararsan iyo unugyo isku xiran. Intaa waxaa dheer, baadhitaano dhowaan la helay waxay caddeeyeen in enzimkani joojiyo metas-maskaxda sambabada, taas oo soo jeedinaysa in bromelain loo isticmaali karo in lagu daaweeyo cuduro kala duwan, oo ay ku jiraan kansarka.
Fiiri suugaanta sayniska, oo ay ku jiraan 1,600 iyo maqaallo qiimeynaya faa'iidooyinka daawooyinka ee bromelain, ayaa muujinaya in loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhibaatooyin caafimaad oo ballaaran, oo ay ku jiraan:
Dhaawacyada unugyada xiran, sida ilmada ACL
Arthritis, xanuunka wadnaha iyo osteoarthritis
Dhibaatooyinka dheef-shiidka sida mideeynta ama shubanka
xanuunada wadnaha iyo
cudur malawad oo caabuq leh
Cudurada sanka, sida boronkiitada iyo sinusitis
Dhaawaca qaliinka iyo bogsashada nabarrada maqaarka ama gubashada
Nadaafad xumo daroogo, gaar ahaan antibiyootiko, iyo astaamaha sababtoo ah qaadashada daawooyinka
Orange, orange orange, orange orange, orange marmalade ah waxaa loola jeedaa geed citrus ah (Citrus × aurantium) iyo midhihiisa. Waxay ku dhalatay jiilaalka Aasiyada Aasiya, waxaana dadku ku faafay qaybo badan oo adduunka ah. Dhirta duurjoogta ah waxaa laga helaa meelo yar yar oo ku yaalla meelo yar yar oo qoryo ah oo ka mid ah Florida iyo Bahamas ka dib markii lagu soo bandhigay aagga laga soo qaaday Spain, halkaas oo lagu soo bandhigay laguna beeray si aad ah oo ka bilowda qarnigii XYX ee Moore. Orange bereet ah ayaa loo suuq gareeyaa sida cunto nafaqo leh sababtoo ah sifooyinkiisa kicinta, inkasta oo xogta nabadgelyadu ay ka maqan tahay waxaana la xiriiray waxyeelooyin waxyeelo leh oo ay ka mid yihiin istaroogga iyo weerarada wadnaha.
Noocyo badan oo orange ah oo qadhaadh ayaa loo isticmaalaa saliida lagama maarmaanka ah, waxaana laga helaa cadar, oo loo isticmaalo sidii dhadhan ama wax lagu kariyo. Waxyaabaha kala duwan ee lafaha leh ee Seville waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka marmalade.
Orange liinta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada dabiiciga ah sida kaneecada iyo xakamaynta cuntada, sababtoo ah maaddada firfircoon, synephrine. Cuntada la isku qurxiyo waxaa lagu xiray dhowr waxyeelo oo kala duwan iyo dhimasho, kooxo macaamiil ahna waxay ku doodaan in dadku ay ka fogaadaan isticmaalka miro-caafimaadeedka. Wali lama soo gabagabeyn haddii xitaa qorraxdu ay saameysaa xaaladaha caafimaad ee wadnaha iyo xubnaha wadnaha, ama naftiisa ama qaabab kale oo kale. Qalabka tixraaca caadiga ah waxaa lagu sii daayaa oo ku saabsan mulkiilaha qorraxdheer by Machadka Heerarka iyo Tiknoolajiyada (NIST), miro dhulka, soo saarida iyo foomka qiyaasta afka, iyo kuwa la isugu duubay hal shey.